Mandalas🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Mandalas.wiki
Mandalas Drafitra mahaliana ny olona maro izy ireo ary tena mitondra soa ho an'ny saina. Voalohany indrindra, ilaina ny mahafantatra fa ny famoronana sary amin'ny endrika boribory dia zavatra tena antitra.
Ny firaketana voalohany an'ny mandalas dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tao amin'ny faritr'i Tibet. Miely any amin'ny firenena maro any Atsinanana koa, toa an'i India, Sina ary hatrany Japon. Amin'ny toerana rehetra, ny teny mandala dia a fitenenana nalaina avy amin'ny Sanskrit , izay midika hoe boribory. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny fombafomba ara-pivavahana na ho endrika mifantoka mandritra ny fisaintsainana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao bebe kokoa momba ny tantaran'ity zavakanto taloha ity izay mitohy mandraka androany ary ho hitanao hoe inona ny tombony azo amin'ny vatana sy saina. Ary koa satria mahazatra ny mahita boky for fandokoana sy ny tombokavatsa izay maneho ireo karazana mandala isan-karazany.
Inona ireo mandala? ☸️
Mandala dia teny avy amin'ny fiteny sanskrit, izay heverina ho fiteny maty ary midika faribolana. Na izany aza, na dia ankehitriny aza, ny Sanskrit dia raisina ho iray amin'ireo fiteny ofisialy 23 any India, noho ny maha-zava-dehibe ny Hindoisma sy ny Bodisma.
Araka izany, mandalas dia volavolan'ny endrika geometrika concentric . Izany hoe mivoatra amin'ny ivon-toerana iray ihany izy ireo. Hatrany am-piandohana, nantsoina ireo sary yantras , izay teny iray nalaina avy amin'ireo fiteny ampiasaina ao amin'ny saikinosy Hindustani ho an'ny zavamaneno. Izany hoe ny mandala izy ireo dia fitaovana hanatratrarana tanjona iray fa tsy ny tanjona kendrena.
Ny tanjona kendrena dia fanovana arakaraka ny kolontsaina tsirairay izay ahitan'izy ireo. Amin'ny ankamaroan'izy ireo, ny mandala dia endrika mifantoka amin'ny fisaintsainana. Tsy ny fifantohana amin'ny endrika fotsiny, fa ny fananganana ny sary izay tena manandanja indrindra.
Ny endrika dia azo foronina amin'ny akora samy hafa, fa maro loko hatrany izy ireo. Ny fomba mahazatra indrindra hamoronana mandala dia amin'ny alàlan'ny ny inks miloko amin'ny taratasy na lamba. Na izany aza, ny sasany amin'ireo tempoly bodista dia mitazona ny fomban-drazana amin'ny fanaovana mandala amin'ny vy na hazo.
Misy fomba iray hafa hamoronana mandala izay niavaka kokoa aza, izay ataon'ny moanista bodista any amin'ny tempoly sasany manerantany. Ao amin'ireo tempoly ireo, ny moanina dia nandalina ny kanto amin'ny famoronana mandala fasika miloko nandritra ny taona maro. Mety maharitra ora na andro maromaro ny fanaovana sary ary rehefa vita ilay sary dia rava avy hatrany. Aorian'izay vao ariana ao anaty renirano ireo fitaovana ampiasaina. Ity zava-kanto ity dia maneho fa mandalo vetivety ny fiainana rehetra.
Taiza ary oviana izy ireo no noforonina? 🤓
Ny firaketana voalohany momba ny famoronana mandala dia nanomboka tamin'ny Taonjato faha-XNUMX, ao amin'ny faritra misy an'i Tibet . Hatrany am-piandohana, ny sary dia nampiasaina tao amin'ny fivavahana bodista ho endrika fifantohana sy fanampiana amin'ny fisaintsainana.
Tamin'io vanim-potoana io ihany, dia hita ihany koa ny mandala any amin'ny faritr'i India, Sina ary taty aoriana any Japon, toy izany, tsy amin'ny Buddhism ihany, fa koa amin'ny Hindoisma ary koa ao amin'ny Taoism, izay heverina ho mandala ireo marika yin sy yang. .
Na izany aza, ny fivavahana rehetra dia mihevitra ny sary ho zavatra kely fotsiny MASINA , izay matetika maneho ny boriborin'ny fiainana. Amin'ny lafiny sasany amin'ny Bodisma, ny mandala dia aseho ho toy ny lapan'ny andriamanitra ary masina noho izany.
Na dia izany aza, na dia avy any Atsinanana aza ny firaketana ofisialy voalohany, dia hita fa ny zanatany amin'ny kaontinanta amerikana dia nampiasa endrika geometrika concentric koa tamin'ny fombafomba. Indrindra amin'ny cult mifandraika amin'ny fanasitranana. Teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX dia nanomboka nampiasa sary ny fiangonana tao zava-kanto masina sy fitaratra voaloto tao importantes trano .
Tamin'io vanim-potoana io ihany dia niparitaka ny hevitry ny alchemy, izay nisy mpahay siansa an-jatony nandinika ny fomba fanovana fitaovana. Tafiditra ao anatin'izany koa ny mandalas, satria hita amin'ny sary an-tsoratra maro hermetika voasoratra tamin'izany fotoana izany ny sary. Fantatra araka izany fa ny olombelona dia nahaliana hatrany ny fomba fanamboarana ny sary, izay mitohy mandraka androany.
Araka ny efa voalaza, ny fandikana ara-bakiteny ny teny mandala avy amin'ny fiteny sanskrit dia a faribolana. Ity faribolana ity dia nampiasaina efa an-jato taona maro lasa fanehoana ny fizotry ny fiainana na koa ny lapan'andriamanitra hotompoina. Na izany aza, mety tsy mitovy amin'ny kolontsaina sy ny kolontsaina izany.
Ohatra, amin'ny Hindoisma ny mandalas dia ampiasaina hanehoana ny fiainana araka ny endrik'izao rehetra izao. Eto izy ireo dia maneho ny fampiraisana sy ny firindrana amin'ny zavatra rehetra tokony hatao.
Amin'ny Buddhism, mahery izy ireo zavamaneno fisaintsainana satria manana ny fahaizana misarika ny saina amin'ny endriny sy ny lokony izy ireo. Amin'ny fivavahana dia mbola azo ampiasaina hanehoana ny hafohin'ny fiainana izy ireo, rehefa vonona amin'ny fasika sy ny fonenan'andriamanitra izy ireo.
Ao amin'ny kolontsaina Taoista, ny filozofia yin yang dia mampiasa ny fampisehoana mandala azy manokana. Eto, ny fampiraisana ireo marika roa dia mamorona iray manontolo ary maneho ny fandanjana tsy maintsy tazonina amin'ny lafim-piainana rehetra. Any amin'ireo tanàna talohan'ny fanjanahana anefa dia misy ny famantarana fa ny sary dia nampiasaina tamin'ny lanonana fanasitranana.
Inona avy ireo karazana mandala? 🙂
Araka ny efa voalaza, ny fitaovana isan-karazany dia azo ampiasaina amin'ny fananganana mandala. Amin'izany fomba izany, ny tsirairay dia maneho zavatra samy hafa, toy ny fahasalaman'ny olona na ny fiainany tsara, rehefa ampiasaina ho fanomezana ho an'ny olona iray. Zahao eto ireo karazana mandala lehibe sy izay ilana azy ireo.
Ny mandala fasika dia fomban'ireo moanina Tibetana. Amin'ity zavakanto ity, ny sary dia namboarina tamin'ny tany tamin'ny fasika miloko ary zavatra nentim-paharazana amin'ny kolotsaina bodista.
Alohan'ny hanombohana ny famoronana mandala fasika, ny moanina dia nandalina ireo teknika nandritra ny taona maro ary nanao andro fisaintsainana mialoha mba hiomanana. Matetika ny asa dia maharitra ora maro hanomanana ary amin'ny farany atsipy any anaty renirano na loharano hafa mandeha ny rano.
Ny hevitra dia ny hisolo tena ny fohy ny lafiny rehetra amin'ny fiainana , satria ho tapitra ao anatin'ny adiny iray ny zava-drehetra. Amin'io lafiny io dia misolo tena vaovao ihany koa izy ireo voalohany satria azo atao foana ny mamorona endrika fasika vaovao.
Ohatra iray hafa amin'ny fomban-drazana bodista ny mandala vita amin'ny fitaovana toy ny hazo na vy. Eto izy ireo dia afaka maka endrika telo-habe ary ampiasaina amin'ny ankapobeny fanehoana ny tranon'ny andriamanitra sasany.
Izy ireo koa dia be mpampiasa ho fanomezana. Amin'io lafiny io, ny fizotrany dia fehezin'ny fomban-drazana sy fombafomba isan-karazany, izay midika hoe finiavana, satria tsara ny mandray mandala ho fanomezana avy amin'ny olona iray.
Amin'ny fomban-drazana hindou dia mahazatra ny mahita mandala vita amin'ny loko isan-karazany any amin'ny tempoly sy toerana masina hafa. Ny loko mamirapiratra dia ampiasaina amin'ireto teknika ireto, izay matetika maneho ny isan-karazany chakras ny vatana olombelona. Amin'ny fomban-drazana Hindou dia toy ny ivon-kery izay miparitaka manerana ny vatan'olombelona izy ireo.
Amin'izany fomba izany, ny lokon'ny loko ampiasaina amin'ny sary dia fomba iray hanarenana ireo chakra ireo ary hamela angovo mivezivezy tsara kokoa. Ka manome antoka ny fanatsarana ny fiainana ara-panahy sy ara-batana.
Ahoana no fanaovana sary mandala ao an-trano? 🤓
Ny moanina dia mianatra mandritra ny taona maro mba hamoronana mandala miloko be pitsiny. Na izany aza, amin'ny fampiharana kely dia azo atao ny mitroka ny tombotsoan'ity zavakanto ity, tsy misy asa be loatra. Mba hanaovana izany dia azonao atao ny manintona ny endrikao manokana amin'ny fanarahana toro-hevitra vitsivitsy ary koa horonan-tsary amin'ny YouTube.
Voalohany indrindra, mila manisy boribory eo amin'ny ravin-taratasy ianao, satria ny mandala dia midika hoe "faribolana". Mila mitandrina ianao fa tonga lafatra araka izay tratra ny sary ', ahafahanao mampiasa a manodidina na lovia. Amin'izay vao azo atao ny mahazo valiny farany tsara.
Jereo ny faribolana, mila mahita ny afovoany ianao ary manoritra tsipika. Avy eo manaova tsipika mahitsy iray hafa ary tohizo izany mandra-pahitanao ny ampy. Ity no maodely ifotoran'ny mandala rehetra tianao hamboarina. Avy eo, ampiasao fotsiny ny eritreritrao ary ampio tsipìka, voninkazo, endrika geometrika ary teny mihitsy aza.
Nefa tadidio fa tsy maintsy misy dikany manokana ho anao ireo ary tokony hanokan-tena tanteraka amin'izany famokarana izany ianao. Rehefa vita ny sary dia fandokoana azy fotsiny amin'ny loko miloko marevaka.
Mandalas handoko ☸️
Mandalas dia nanjary malaza manerantany. Noho izany, misy safidy maromaro ho an'ny sary vonona sy boky fandokoana. Izany dia mahatonga ny olona maro hisafidy ny hanao izany rehefa manandrana mitady fitsoahana amin'ny olana andavanandro. Raha tsy manam-potoana na fahaizana mamorona mandala anao ianao dia ireto misy sary azonao atao pirinty sy hoso-doko ao an-trano. Zahao hoe.
Misy tombony tokoa ve ny famoronana mandala?
Eny, ny mandala dia nampiasaina nandritra ny taonjato maro mba hanatsarana ny fifantohana ary tena mahasoa. Amin'izany, ny fandokoana ny sary dia afaka manampy amin'ny fihenan'ny tebiteby sy adin-tsaina . Mandray anjara amin'izany hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana.
Ny teboka tsara iray hafa momba ny mandala dia ny hoe noho ny fitongilanana ara-panahy dia afaka manampy be dia be ho an'izay mitady fahazavana izy ireo. Ho an'ireo izay maniry fialam-boly vaovao fotsiny, dia mety ho fiofanana tsara amin'ny fahaizana sary sy sary hoso-doko.